Nhau - Iyo yakakosha tekinoroji munda iri kumashure zvishoma, kukwira kwenyika yangu pombi indasitiri ine nzira refu yekufamba
Kwenguva yakati rebei, kuvandudzwa kwenyika yangu yepombi indasitiri kwave kuchikwira nekusvetuka nemuganhu. Inotungamirwa nemitemo yenyika inoyevedza yekugadzira, ese maindasitiri chiyero uye zvehunyanzvi zviyero zvakagadziriswa zvakanyanya kuburikidza nekuunzwa kwenzira dzakawanda senge yekumwa, kuvandudza uye shanduko, uye kugaya uye hunyanzvi. Kunyanya, iyo nhanho yekutsigira zvigadzirwa kune mamwe makuru pombi matekinoroji nemidziyo zvasvika kune yepasi rose inotungamira nhanho.
Izvo zvinonzwisiswa kuti pasi pekutungamira kwekudiwa kwemusika, zvigadzirwa zvemupombi-zvepamusoro-soro zvemunyika yangu zvakadai sepombi dzakakura-dzakamanikidza nekodzero dzakazvimirira dzehungwaru dzakaumba zvakakwana uye zvinokwanisa kugona kutsigira masimba emagetsi, simbi, petrochemicals, uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Uye pamwe neshanduko dhizaini yedhizimusi rekupa pamwe nekuvandudzwa kwehunyanzvi hwenzvimbo, simba rese renyika yangu yepombi indasitiri rakapfupisa mukana uyu nenyika dzakabudirira.
Mushure mekupinda mu "chirongwa chegumi neshanu-chemakore mashanu", kuitwa kwezvivakwa zveinjiniya zvakakurumidza, uye kuchengetedza kwesimba uye kudzikisira kusvuta munzvimbo dzakakosha chave chimwe chekutarisirwa kwebasa. Hondo yebhuruu yekudzivirira, kudzivirira kwekudzivirira mvura uye kudzora, uye kudzora simbi zvine hudzamu zvakafambira mberi mukudzika, uye maitiro ekudzivirira kusvibiswa uye kutonga kwakasimudzirwa zvine simba. Iko kukosha kwepombi indasitiri kunozviratidza-pachena.
Dhata inoratidza kuti saizi yemusika weindasitiri yepombi yenyika yangu mu2017 yaive yakatenderedza 170 bhiriyoni. Nhamba dzisina kukwana dzinoratidza kuti kune angangoita zviuru zvinomwe zvemakambani epombi nyika yese uye anopfuura mabhizinesi chiuru pamusoro pehukuru hwakatarwa. Nekunaka kwakanaka kwemitemo yenyika neyemunharaunda, ramangwana remhizha indasitiri harinakidze.
Kukurumidza kufambira mberi, kutarisisa kune mukurumbira pasi rose, kubudirira kwakanyanya… Aya mazwi ekurumbidza anoshandiswa nemazvo muindastiri yepombi munyika medu, asi kuseri kwemaruva ari kutumbuka, kune zvakare matambudziko asingakwanise kufuratirwa.
Kutanga, iyo nhamba yeSMEs yakakura kwazvo. Mukuita kwekukurumidza kuvandudza kwepombi indasitiri, madiki uye epakati-epakati makambani epombi nemakambani epombi akazvimiririra akabuda mumwe mushure meumwe, uye anotora chikamu chakakura chehuwandu hwakazara hwemakambani epombi. Iko kushomeka kwemakambani makuru, uye mhando uye musimboti wemakambani madiki haana kusimba, izvo zvisingabatsire mukusimudzira kwese kwepombi indasitiri.
Chechipiri, mushamba wevasungwa wakaderera. Nekunonoka kwekudiwa kwemusika uye kupihwa kwakaringana, indasitiri yepombi yenyika yangu iri kuramba ichikura, asi musika unokwanisa wemabhiriyoni zana yuan wakagadzirira kuenda. Inofananidzwa nehukuru hwesika yemusika, musika wekusungwa wakaderera, uye kutengesa kwegore kwebhizimusi hombe kuri pasi pemabhirioni gumi kana kunyangwe pasi pemabhirioni mashanu. Naizvozvo, pane kudiwa kwekukurumidza kwekuwedzera mushamba.
Chechitatu, zvinoenderana nematanho ehurongwa hwenyika e "kuunza, kugaya, kunyorova, uye hunyanzvi", indasitiri yepombi yenyika yangu yakabatsira chaizvo. Nekudaro, mune chaiko mashandiro, mamwe makambani anowanzo kuunza Kune iwo kunyange mashoma, izvo zvinoita kuti kusimudzira kweangu epombi indasitiri kuwira mudenderedzwa risinganzwisisike. Iko hakuna akawandisa uye mashoma matekinoroji ane yakazvimirira yehungwaru pfuma yekodzero
Kazhinji kutaura, kunyangwe mazhinji ezvigadzirwa mumakambani epombi epasirose akawana kugadzirwa kwakazvimirira nekugadzira, pane mashoma zvigadzirwa zvezvikamu zvine kodzero yakazvimirira yezvivakwa, uye humwe hunyanzvi hwetekinoroji huri mumaoko enyika dzakabudirira, zvekuti makambani epombi epamunyika yangu. vari munzvimbo yakaderera-kumagumo. Zvakare, nekuda kwekukanganisa kwekutanga kwekutsvagisa tekinoroji, kuvandudzwa kwemichina yakakosha uye zvinhu zvekutanga muindasitiri yepombi yenyika yangu iri kusarira kumashure, icho chave chipingaidzo chikuru mukusimudzira indasitiri, uye iri kutarisana nenjodzi yekubvisa yechinyakare kugadzirwa chinzvimbo. Naizvozvo, kusimuka kwepombi indasitiri kune nzira refu yekufamba. .